Coronavirus gwọrọ na mba 8
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Coronavirus gwọrọ na mba 8
Airlines • Akụkọ kacha ọhụrụ na Belgium • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Kambodia • Akụkọ na -agbasa ozi China • Education • Finland na -agbasa ozi ọma • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • India na -agbasa ozi ọma • Akụkọ okomoko • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • nzukọ • Akụkọ gbasara Nepal • News • ndị mmadụ • Resorts • Safety • Akụkọ na -agbasa na Spain • Akụkọ Sri Lanka • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ UK na -agbasa • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Kedu njem njem dị mma na Coronavirus?
Nje virus ahụ etinyewo ihe ngosi pụtara ìhè na ụlọ ọrụ njem, n'agbanyeghị na ọtụtụ mba ụwa enweghị nje virus. Healthtù Ahụ Ike Worldwa atụtụbeghị aro imechi oke ma mepụta ụjọ n'etiti ndị chọrọ ịchụ ụwa.
Ndị ọkà mmụta sayensị na-arụ ọrụ oge niile iji chọta ọgwụgwọ na ọgwụ mgbochi maka COVID-19, nke a makwaara dị ka coronavirus. Site na ikpe 68,386 nke COVID-19 na China naanị na ọnwụ 1894, ọ bụ ozi ọma ọ bụghị naanị maka njem na njem nleta na mba 8 nwere ike iwepụ ma gwọọ ndị na-arịa nje ahụ.
Ozi ọma ahụ bụ na China kwuru na ọ bụ nje 143 nwụrụ na mmịnye n'okwu ọhụrụ ụnyaahụ ebe onye isi nke Healthtù Ahụ Ike praisedwa toro mbọ mba ahụ na-ebute ọrịa ọhụrụ ahụ, na-ekwu na ha "zụta oge ụwa" na mba ndị ọzọ ga ọtụtụ n'ime ya.
Ka ọ dị ugbu a, France, kọrọ ọnwụ mbụ Europe site na nje ọhụrụ ahụ, onye njem nleta si China na mpaghara Hubei, ebe ọrịa ahụ pụtara na December. United States na-akwado ịkwaga ndị njem America ịlaghachi n'ụlọ ha maka ụgbọ mmiri iche na Japan.
India, Russia, Spain, Cambodia, Nepal, Belgium, Sri Lanka, Finland niile edebanyere aha Coronavirus wee nwee ike iwepụ nje ahụ na mba ndị ahụ.
Ọ na-achọ ịdọ aka ná ntị na itinye aka na mgbe ụfọdụ ụlọ ọrụ ahụike kachasị elu iji mee nke a.
Njem nleta bụ nnukwu azụmahịa na ụfọdụ mba ndị emetụtara. Iwepụ na ịkpa ókè megide ndị njem si mba ụfọdụ nwere ike ọ gaghị abụ mgbe niile isi iji merie egwu nke nje a.
Kambodia ụnyaahụ kwuru yana-anabata ndị njem nleta si China na ogwe aka oghes ma gbaa ụlọ nkwari akụ ume inye ndị ọbịa China ọnụego ọbụbụenyi pụrụ iche.
Nepal na-aga n'ahịa ITB njem ụlọ ọrụ njem na-abịanụ na Berlin. Obodo a anaghị akwụsị ime afọ nke Nepal 2020, afọ pụrụ iche iji kwalite njem. Ndị njem njem nlegharị anya nke Nepal yana ndị nnọchi anya Nepal na Berlin edebanyela aha ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị ahịa 200 kachasị elu na ndị enyi nke Nepal isonye Night Nepal haziri site na eTN na Machị 5 na Lagenhaus na Berlin, Germany. Ndị na-agụ ya eTurboNews a na-akpọ gị ka anyị mee ememe ndị njem na ebe Coronafree.
Debanye aha maka Nepal Night na Berlin na ITB
Maka Sri Lanka, mkpochapu Coronavirus bụkwa ozi ọma ebe ọ bụ na mba ahụ ka na-agbake site na ụjọ ụjọ na Eprel 2019, nke gburu ihe karịrị ndị ọbịa 40. Sri Lanka na-enye ndị njem visa n'efu n'efu. Otu ndi otu ndi isi na Sri Lanka Hotels Jetwing nabata nnabata mbụ ha na nke ọhụrụ ha Ebe a na-etebe ihe na Kandy Gallery Resort.
A na-eri nri-nri-nri na-na-Jetwing-Ayurveda-Pavilions, Sri Lanka
Na nwute, nke a nwere ike ịbụ ozi ọma maka obere oge na obere oge ka Narasimhan, onye isi oche nke ụlọ ọrụ ọgwụ na Switzerland bụ Novartis, gwara CNBC: “Nke bụ eziokwu bụ, ọ ga-ewe otu afọ na atụmanya m ịchọta ọgwụ mgbochi ọhụrụ maka nke a , anyị kwesịrị iji njikwa epidemiological mee ihe n'ezie iji nweta ọnọdụ a n'ọnọdụ ka mma.
Ka ọ dị ugbu a, nje a na-arụ ọrụ na mba ndị na-esote na ọtụtụ ọnụọgụ ederede. Ezigbo ọnụọgụ ndị ọrịa nwere ike ịdị elu karịa maka na ụfọdụ ọrịa nje a na-adị ka oke oyi na ọgaghị ama onye bu ya n'agbanyeghị na ha na-efe efe.
Safertourism na-ahazi ihe omume nri ụtụtụ nke ikpeazụ na akụkụ nke ngosi ahia ITB na Berlin, Germany. Ozi ndi ozo banyere otu esi esonye: http://safertourism.com/coronavirus/
Pịa iji tinye mkparịta ụka
Nchekwa njem na-enyekwa webinars nkeonwe ya na Dr. Peter Tarlow, ọkachamara ama ama na njem na njem nleta na nchekwa. Dr. Tarlow na-akụzikwa n'ụlọ akwụkwọ ọgwụ na-akụzi ihe na Coronavirus. Ozi ndi ozo banyere otu ulo oru ma obu ebe igha esi abanye na nkwukọrịta https://safertourism.com/qa/